कुन राशिको लागि आजको दिन कति शुभ ? – हेर्नुहोस् बैशाख २० गते शुक्रबारको राशिफल : अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता दिवस « Dhankuta Khabar
कुन राशिको लागि आजको दिन कति शुभ ? – हेर्नुहोस् बैशाख २० गते शुक्रबारको राशिफल : अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता दिवस
आज श्री शाके १९४१ बि.स. २०७६ साल बैशाख २० गते शुक्रबार इश्वी सन् २०१९ मे ३ तारीख वैशाख कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथी रेवती नक्षत्र १४ः४४ बजे सम्म पश्चात अश्विनी नक्षत्र विष्कुम्भ योग ५ः४० बजे सम्म पश्चात प्रीति योग भद्रा करण चन्द्रमा मिन राशिमा १४ः४४ बजे सम्म पश्चात आनन्दादि योगमा श्रीवत्स योग सुर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु माताति चह्रे पूजा अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता दिवस – ज्योपं. सरोज घिमिरे / धनकुटा खबर
पारीवारिक मनोरञ्जनका निम्ती सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । आर्य आर्जनका निम्ती सामान्य यात्राको योग बन्नेछ । प्रतिश्पर्दिहरु सवल रहनाले कार्य सम्पादनमा कठिनाई उत्पन्न हुन सक्नेछ । नयाँ लगानिका क्षेत्रमा समय उत्तम रहेको छैन । स्वास्थमा सामान्य तनाव उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
कला कौशलका क्षेत्रबाट प्रशस्त आम्दानि लिन सकिनेछ । कुल कुटुम्बहरुको साथ सहयोगमा नयाँ कार्यको थालनि हुने सम्भावना रहेकोछ । मानसिक चन्चलताका कारण अध्यन अध्यापनमा कठिनाई उत्पन्न हुन सक्नेछ । सामाजिक कार्यमा जुट्ने अवसर प्राप्त हुनेछ ।
कार्य क्षेत्रमा लगाईएको श्रमको उचित कदर हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ । मान्यजनहरुको साथ सहयोगमा नयाँ कार्यको थालनि हुन सक्नेछ । प्रियजन सगँको क्षणिक बियोगको सम्भाबना रहेकोछ । साहित्य संगीतका तर्फ मन रम्नाले एकान्त प्रिय वाताबरणमा मन रम्नेछ ।
धार्मिक क्षेत्रको यात्राको सम्भावना रहेकोछ । मित्र तथा दाजु भाईहरुको साथ सहयोगमा अधुरा कार्यहरु सम्पादित हुनाले कार्यको श्रेय समेत प्राप्त रहनेछ । मान्यजनको प्रशन्नताका निम्ती सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । प्रिय खवरको श्रवणले मन प्रशन्न रहला ।
स्वास्थ क्षेत्रको समस्या जटिल बन्नसक्ने सम्भाबना रहेकोछ । खानपानको क्षेत्रमा बिषेश सजग रहनु उत्तम रहनेछ । यात्राका क्रममा सामान्य चोट पटक योग रहेकोछ । मनमा उत्पन्न नकरात्मक सोचका कारण मानसिक तनाब बढ्नेछ । कार्य सम्पादनमा अरुको दबाव सहनु पर्ला ।
जिवन साथिको साथ सहयोगमा स्थीर क्षेत्रमा गरीएको लागानिको दीर्धकालिन फाईदा प्राप्त हुनेछ । ब्यापार ब्यवसायमा खर्चिएको समय उत्तम रहनेछ । बाणीमा मधुरता छाउनाले हर क्षेत्रमा प्रशंसित रहिनेछ । भोज भातेर जन्यकार्यमा सहभागीताको अवसर जुट्नेछ ।
सामाजिक कार्य प्रति रुचि बढ्ने योग रहेकोछ । स्वास्थ क्षेत्रमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । प्रतिश्पर्दा जन्य क्षेत्रमा सावधानि अपनाउनु उत्तम रहनेछ । मनोरञ्जनका क्षेत्रमा सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । नयाँ लगानिका क्षेत्रमा सजग रहनु होला ।
बिशिष्ट ब्यत्तिहरुको साथ सहयोगमा नयाँ कार्यको थालनिको योग रहेकोछ । बिद्यार्थी बर्गहरुको निम्ती उत्तम समय रहेकोछ । सामान्य कार्यका लागी अधिक श्रम खर्चनु पर्ने सम्भाबना रहेकोछ । मानसिक चन्चलताका कारण गरीरहेको कार्य परीर्वतनको योग रहेको छ ।
मान्यजन सगँको सम्बन्धमा तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । कामकाजका क्षेत्रमा सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । भौतिक श्रोतसाधनको परीचालनमा समय ब्यतित रहनेछ । प्रिय खबरको श्रवणले मन प्रशन्न रहनेछ । कार्य क्षेत्र परीर्वतनको सम्भाबना रहेकोछ ।
पुराना मित्रजनहरु सगँको भेटघाटले मन हर्षित तुल्याउला । शारीरिक स्फुर्ति बढ्नेछ । कार्य क्षेत्रमा भने त्यति समय तथा मन लगाउन नसकिएला । अरुको कार्य त्रुटिको दोषको भागीदार बन्नुपर्नेछ । झन्झट पुर्ण यात्राको सम्भाबना रहेकोछ ।
स्थीर क्षेत्रमा गरीएको लगानि उत्तम साबित हुनेछ । स्वास्थ क्षेत्रमा सामान्य सुधारको अनुभब हुनेछ । कुल कुटुम्बहरुको साथ सहयोगमा नयाँ कार्यको थालनिको योग बन्नेछ । सभासम्मेलनमा सरिक रहने अवसर जुट्नेछ । यात्रा मनोरञ्जन पुर्ण ब्यतित रहला ।
पारीवारिक सम्बन्धमा सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । मानसिक चन्चलताका कारण ब्यपार ब्यवसायमा कठिनाई आईपर्न सक्नेछ । सामाजिक कार्यका क्षेत्रमा समय ब्यतित गर्दा उत्तम रहनेछ । सामान्य मान सम्मान प्राप्तीको योग समेत रहेकोछ ।
तपाईको आजको दिन कति शुभ ? – हेर्नुहोस् असार ३१ गतेको राशिफल
आजको दिन कुन राशिको लागि कति शुभ ? – हेर्नुहोस् असार ३० गतेको राशिफल
आजको दिन कुन राशिको लागि कति शुभ ? – हेर्नुहोस् असार २८ गतेको राशिफल
आजको दिन कुन राशिको लागि कति शुभ ? – हेर्नुहोस् बैशाख १९ गतेको राशिफल
कुन राशिको लागि आजको दिन कति शुभ ? – हेर्नुहोस् बैशाख १८ गते बुधबारको राशिफल